IGuubie: Ipulatifomu Yokumaketha Ye-imeyili engu- $ 59 Ngonyaka Martech Zone
IGuubie: Ipulatifomu Yokumaketha Ye-imeyili engu- $ 59 Ngonyaka
NgoLwesine, Septhemba 26, 2013 NgoLwesihlanu, ngoJuni 19, i-2015 Douglas Karr
UGuubie yethule i-beta futhi ingase inyakazise umhlaba wokumaketha we-imeyili ngemali ephansi engu- $ 59 ngonyaka, ukubuyisela emuva izingulube I-imeyili ye-Mandrill API. Ngiyajabula ukubona ezinye izinkampani ezinezindleko eziphansi zingena enkingeni uma kukhulunywa ngokukhangisa nge-imeyili. Kule bhulogi, ngokwesibonelo, besikhokha imali ephindwe kabili kunesevisi yethu ye-imeyili kuneyethu ukusingathwa kokuqala.
The UGuubie Ipulatifomu Yokumaketha nge-imeyili ifaka phakathi:
Imikhankaso Yokumaketha Nge-imeyili - Dala imikhankaso yokuthengisa ye-imeyili elethelwa abasebenzisi bakho. Yenza abantu bafunde okuqukethwe kwakho futhi bahlanganyele nge-imeyili nangamanethiwekhi omphakathi. Thumela ama-imeyili asebenzisanayo futhi abambe amehlo ngezifanekiso ze-imeyili eziphendulayo.
Ukulethwa Okuphezulu - Xhuma i-Guubie kusevisi oyikhethayo yokulethwa kwe-imeyili, njenge-Mandrill, i-MailJet, i-Amazon SES noma enye i-SMTP. Isibonelo, uma usebenzisa iMandrill, ungathumela ama-imeyili angama-12,000 mahhala ngenyanga.
Imibiko Ethuthukile Nezibalo - Sebenzisa yabo analytics ubika futhi uwahlanganise ne-Google Analytics kuwo wonke umkhankaso wokukunikeza lonke ulwazi olufanele oludingayo.
I-ROI engcono enezivivinyo ze-A / B - Dala izivivinyo ze-A / B ezingenamkhawulo ukukusiza ukuthi uthole umlayezo osebenza kahle kakhulu ongawuletha kubasebenzisi bakho.
Isiphequluli neMac OSX / Windows App - Ngesiphequluli esijwayelekile njengeFirefox, iSafari noma iGoogle Chrome, ungafinyelela kuGuubie nazo zonke izici zayo, noma ngabe ukuphi emhlabeni. Uma ufuna ukufinyeleleka kweselula, ungalanda futhi uhlelo lokusebenza lweGuubie lweMac OSX noma iWindows.
Izimbangela ezisuselwa ezenzweni - ungadala okubangela ukuthumela ngokuzenzakalela usuku lokuzalwa oluhle kubabhalisile bakho noma i-imeyili yesibili yokwamukela ezinsukwini ezimbili ngemuva kokuthi umsebenzisi enze i-akhawunti. Shintsha imisebenzi yakho yokumaketha.
I-API yonjiniyela nokuqalisa - UGuubie une-Powerful XML API, okusho ukuthi abathuthukisi bangahlanganisa kalula amapulatifomu abo kanye nezinsizakalo ne-akhawunti yabo yeGuubie.
With UGuubie, ukhokha imali eyodwa, ephansi yonyaka… $ 59!
Tags: amazon sesimeyiliguubieeziphansii-mandrill
Sep 26, 2013 ngo-4: 19 PM
Onodoli abangama-59 ngonyaka kushibhile futhi uma kusebenza kahle kungokweba. Kuzofanele ubheke lokhu ngokwengeziwe kepha kuthakazelise ngokuqinisekile.